Usamisiwe uMoroe kwiCSA yize ethushuke emsebenzini ngoLwesine
UTHABANG Moroe okuvela izizathu ezimenze wabuyela emsebenzini kanti nangoLwesihlanu ubezovukela khona Isithombe: BACKPAGEPIX
STUART HESS noMALIBONGWE MDLETSHE | June 12, 2020
IBHODI labaqondisi beCricket South Africa (CSA) limile ekutheni oyisikhulu esiphezulu kule nhlangano eyengamele ikhilikithi eNingizimu Afrika, uThabang Moroe, sisamisiwe emsebenzini phezu kokuba sithushuke emahhovisi ngoLwesine ngoba ethi seziphelile izinyanga eziyisithupha amiswe zona kusuka ngoDisemba.
Leli bhodi lithi iMoroe umisiwe kuze kube kuphothulwa ucwaningo lwethimba elizimile ngobuholi bakhe.
Ukufika kukaMoroe emsebenzini ngoLwesine kuholele ekutheni ibholi libe nomhlangano oyisipesheli oze waphela phakathi kwamabili kodwa kungaputshuki lutho oluxoxwa kuwo.
Nokho ngemuva kwalo mhlangano, kuvelile ukuthi bebedingida ukuphikisa inkolelo kaMoroe othe uye emsebenzini ngoba sekuphele izinyanga engatshelwa lutho nokusho ukuthi usengabuya.
"Ibhodi lifisa ukucacisa ukuthi isikhulu esiphezulu esimiswe ngoDisemba 2019 kusaqhubeka uphenyo lwesigungu esizimele ekuphathweni kweCricket South Afrika,"kusho isitatimende sebhodi.
"Incwadi ethunyelelwe isikhulu esiphezulu ibicacisa ngokusobala ukuthi uzomiswa kuze kube kuphothulwa uphenyocwaningo. Lolu phenyocwaningo alukaphothulwa nokusho ukuthi isikhulu esiphezulu sisamisiwe kanti ziyachithwa nezinkolelo zakhe zokuthi uphenyu luzobe luphelile uma kungekho okushiwoyo."
Ummeli kaMoroe, uMichael Bill, ubetshele i-Inependent Media ukuthi lesi sikhulu nangoLwesihlanu besizovukela emsebenzini njengoba senzile ngoLwesine.
"Uphoqwa ngumthetho ukuya emsebenzini uma kuphela isikhathi asimiswe,"kusho uBill, osole iCSA ngokuziphikisa.
"Akukaze kubekhona kuqondiswa kobugwegwe, kube nezingxoxo nje."
UMoroe umiswe ngesonto lokuqala likaDisemba, iCSA izeseka ngokuthi:
"(ilandela) imibiko yeSocial and Ethics Committee kanjalo ne-Audit and Risk Committee ngezinsolo zebhodi zokuhluleka wukuphatha inhlangano."
Kuqashwe uJacques Faul njengebamba esikhundleni sesikhulu esiphezulu, nokuyisihlalo abesasiqhoqhobele nangoLwesine.
Kusukela emisiwe uMoroe akakaze abizelwe esigungwini esiqondisa ubugwegwe kanti nomholo wakhe usalokhu ewuthola ugcwele kusuka ngoDisemba.
UBill uphinde waveza ukuthi uMoroe watshelwa ngomlomo ngoDisemba ukuthi umisiwe nokuyinto eshayisanayo neshiwo yiCSA, imigomo yayo ethi izinyathelo ezifana nalezi zishicilelwa phansi.
NgokukaBill, leyo ncwadi uMoroe uze wayithola ngoJanuwari 24.
"Ngemuva kwamasonto amabili ethole leyo ncwadi ube esethola ucingo lumtshela ukuthi ukumiswa kwakhe kuqala ngesikhathi aziswe ngaso ngoDisemba kuze kube yizinyanga eziyisithupha. Inkinga ngalokho wukuthi imigomo yeCSA ithi umuntu umiswa izinyanga ezimbili, sekungengezwa ngezinye ezimbili uma izimo ziphoqa ngale ndlela."